काम चलाउ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा बजेटको दोहन, जाँदाजाँदै ओली गुटका दुई नेतालाई आँधा अर्ब बजेटः प्रतिपक्ष किन बोल्दैन ? - Aathikbazarnews.com काम चलाउ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलद्वारा बजेटको दोहन, जाँदाजाँदै ओली गुटका दुई नेतालाई आँधा अर्ब बजेटः प्रतिपक्ष किन बोल्दैन ? -
does homework help you in school phd in creative writing australia work as an essay writer automatic thesis statement writer creative writing picture prompts ks1 mfa creative writing programs in germany creative writing using technology que significa doing homework mfa programs creative writing in georgia app to help do homework creative writing activities for 4th grade essay on doing homework digits homework helper volume 1 oakdale k12 homework help homework help epic charter schools because i do my homework list three factors that influence the format ofawritten business plan middlesex university creative writing ma digits homework helper volume 1 answer key purchase persuasive essay custom essay meister discount code how to do well in creative writing gcse monster creative writing essay writing service yahoo answers how does homework help students get better grades how can we help the poor and needy essay words help you to write an essay creative writing stimulus quotes creative writing online programs help my essay
जुनदिन सर्वोच्च अदालतले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधी सभा विघटन निर्णय बदर ग¥यो त्यही दिन केपी शर्मा ओली गुटका महासचिव एवं मुलुकका काम चलाउ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले केपी शर्मा ओली गुटका दुई नेतालाई आँधा अर्ब बजेट स्वीकृत गरेका छन् । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
जाँदा जाँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पूर्व मन्त्री एवं ओली गुटका नेताद्वय महेश बस्नेत र गोकुल प्रसाद बाँस्कोटालाई जनताको करबाट जम्मा भएको आँधा अर्ब पैसा दिने निर्णय गर्नु कति उचित होला । यो खोजीको विषय बनेको छ ।
काम चलाउ अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रधामन्त्रीका अत्यन्तै विश्वासपात्रद्वय बाँस्कोटा र बस्नेतलाई यत्रो पैसा दिनुको कारण के हो ? किन प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस बोल्दैन ।
महेश बस्नेतलाई २९ करोड ?
पूर्वमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटका नेता महेश बस्नेतको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले २९ करोड थप बजेट स्वीकृत गरेको भेटिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा माघ २७ गते बसेको बैठकले सो रकमका लागि अनुमति दिने निर्णय गरिएको देखिन्छ । पूर्वमन्त्री बस्नेतले २१ सडक आयोजनालाई ६३ करोड माग गरेका भए पनि अर्थले २९ करोड दिने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।
महेश बस्नेतले थप ६५ करोड र २१ करोडको थप बजेट माग गरेका छन् । । सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले अध्ययन गरिरहेको छ । २१ सडक खण्डमा अर्थले घटाएर बजेट स्वीकृत गरेको हो । कौशलटार–विरुवा सडकका लागि एक करोड थप बजेट स्वीकृत भएको छ । यसैगरी माग गरेका मध्ये १३ सडकमा एक करोड थप बजेट स्वीकृत भएको देखिन्छ । आठ वटा सडकमा १६ करोड थप बजेट स्वीकृत भएको भेटिएको छ । हेक्का होस् । कहाँ छ प्रतिपक्ष कांग्रेस बोल्नु पर्दैन ।
बाँस्कोटालाई ३५ करोड ?
पूर्वमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले खोपासी–बन्थाली–कामिडाँडा सडक, बनेपा–रविओली–पाँचखाल सडक भक्तपुर नगरकोट–देउपुर र हिगुवापाटी सडकका लागि ५० करोड थप बजेट माग गरेका थिए । यो प्रस्तावमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ३५ करोड रकम दिने निर्णय गरेको भेटिएको छ । यसरी जाँदा जाँदै अर्थमन्त्रीले बस्नेतलाई थप बजेट दिनुको अर्थ के हो ?
अर्थमन्त्रालयले कामीडाँडा सडकलाई १५ करोड, पाँचखाल सडकका लागि ५ करोड र हिगुवापाटी सडकका लागि १५ करोड थप बजेट स्वीकृत गरिएको भेटिएको छ ।
बजेटमा नपरेका योजनालाई पनि टिप्पणी उठाएर पैसा माग्ने नेताहरु थुप्रै भए पनि बाँस्कोटाले बाजी मारेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । त्यस्ता थुप्रै योजनामा सुटुक्क निर्णय गर्दै पैसा छुट्याइएको भेटिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पनि आफ्ना नेताहरुलाई बजेट बाँड्न छोडिएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले थुप्रै योजनामा आर्थिक अनुशासन मिचेर थप बजेट स्वीकृत दिएको देखिन्छ । कहाँ छ माधव–प्रचण्ड गुट किन बोल्दैन ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक अनुसाशन तोड्दै अर्थमन्त्रालयबाट केपी शर्मा ओली गुटका दुई नेतालाई आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई रिझाउन र भोट बढि पाउने लोभले थप बजेट दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पुष ५ पछिका सबै निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएपनि अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्ना कार्यकर्तालाई दिन दुई गुना रात चौगुना बजेट बाँडेका छन् घन्दा फरक पर्दैन । सचेत भया ।
एनएमबि बैंकद्वारा बचत खातामा बीमा दावी भुक्तानी
१० बैंकले गरे ९ अर्ब लगानी